Induction Ukutshisa iinqanawa zeeReactors zoShishino lweTanki lokuFutha kweMichiza
Ikhaya / izicelo / Ukutshisa ukunyuka / Induction Ukutshisa iinqanawa zeeReactors
Udidi: Ukutshisa ukunyuka tags: uthenge iheater ye-induction, ukufudumeza iikhemikhali, zokufudumeza iinqanawa, Ukungeniswa kobushushu, induction Ukufudumeza izixhobo, induction Ukufudumeza itanki, Ukufakwa kweenqanawa zokufudumeza, zokufudumeza iinqanawa, Inkqubo yokufudumeza iinqanawa, Iinqanawa zombane zeRF, zokufudumeza izitya, Ixabiso le-heater induction, iimpahla zombane
Induction Ukufudumeza iiReactors Tank-Vessels
Sinamava angaphezu kwama-20 eminyaka kwi lokutshisa Kwaye sivelise, sayila, senza, sabeka saza sagunyazisa iinkqubo zokuFudumeza uMbhobho kunye neMibhobho kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela.
Ngenxa yokuba inkqubo yokufudumeza ilula ngokwendalo kwaye ithembeke kakhulu, ukhetho lokufudumeza ngokungeniswa kufuneka luthathwe njengokhetho olukhethiweyo.
Njengoko nganye induction ukufudumeza isitya Sispoke kubathengi ngamnye iimfuno ezithile kunye neemfuno, sinikezela ngobungakanani obahlukeneyo ngamaqondo obushushu ahlukeneyo. Iinjineli zethu zineminyaka emininzi yamava ekuguqukeni kweenkqubo zokufudumeza ezenziweyo zesiko kuluhlu olubanzi lwezicelo kuluhlu olubanzi lwamashishini. Izifudumezi ziyilelwe ukuhambelana neemfuno ezichanekileyo zenkqubo kwaye zenzelwe ukulungela ngokukhawuleza kwinqanawa nokuba kukwimisebenzi yethu okanye kwindawo.
izixhobo zokufudumeza iinqanawa